Adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, kuma guuleysan sidii la filayay | Wararka IPhone
Adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, ayaan u guuleysan sidii ay rajeynayeen
Apple ayaa la bilaabay 2014 Apple News, Akhristaha qaabka Flipboard-ka loo yaqaan in aysan ku guuleysaneynin guul ay ka gaaraan daabacayaasha warbaahinta ugu weyn sababta oo ah nidaamka lacagta ee ay bixisay. Tani waxay ku qasabtay shirkadda, afar sano kadib, inay beddel qaabka ganacsiga oo iibsaday Texture, Netflix ee joornaalada.
Bishii Maarso 2019, waxay ku soo bandhigtay Apple News + qaab gebi ahaanba ka duwan qaabkii ugu horreeyay ee Apple News oo marin u leh in ka badan 300 oo majaladaha Mareykanka ah yaaAlaabada laga xushay warbaahinta la xushay $ 9,99. Inta lagu jiro 48-ka saacadood ee ugu horeeya, kasbaday in kabadan 200.000 oo qof halkaasna ay ku joogsatay.
Sida laga soo xigtay CNBC, Apple ma aysan awoodin inay kordhiso tirada macaamiisha mareegtada rukunka joornaalka Apple News +, in kasta oo maalgashi lagu sameynayo xayeysiinta ay sameyso bil kasta. Dhibaatada ugu weyn ee heysata Apple News + waa wargeysyada, maadaama aysan si buuxda u helin midkoodna, kaliya qoraalada qaar oo ay iyagu warbaahinta iska soo xushaan, ee aysan aheyn Apple.
Warbaahinta qoran waligood looma jeedin in laga helo Apple News +, maaddaama badankood ay bixiyaan nidaam bil kasta ah, oo ka qaalisan Apple News + khidmadda, iyo sidoo kale maahan inay cid la wadaagaan. Apple wuxuu hayaa 50% rukunka kasta u qeybinta inta hartay tafatirayaasha iyadoo lagu saleynayo waqtiga macaamiisha ay ku qaataan akhriska waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Ku guuldareysiga inuu xal u helo warbaahinta daabacan ee ugu weyn, Apple waxay baareysaa qaabab kale oo ay ku xoojiso adeegyadeeda sida uu sheegayo Bloomberg, sanadka 2020, Apple waxay bixin kartaa xirmo wada jir ah oo ay la wadaagaan Apple Music, Apple TV + iyo Apple News +, oo waxa kaliya ee aad sameyn karto waa inaad naaxiso lambarada macaamiishaada laakiin maaha xiisaha waxa madalkani runti bixiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, ayaan u guuleysan sidii ay rajeynayeen
42 dhimasho ka dib Apple ayaa barnaamijyada "vaping" ka saaraysa App Store
Apple ayaa la filayaa inay hogaamiso iibinta 5G casriga ah sanadka 2020